Ụzọ anọ nyefee data si Windows ekwentị Android ngwaọrụ maka free
Nyefee data site na otu ngwaọrụ nke ọzọ ga-adị mgbagwoju anya ma na-ewe ahụmahụ. Ka na-anya na abụọ dị mfe ụzọ nke pụrụ inyere gị nyefee data si Windows ekwentị Android ngwaọrụ maka free.
1. Nyefee ọdịnaya site na iji kọmputa.
2. Nyefee ọdịnaya site na iji OneDrive.
3. Nyefee kọntaktị iji Outlook na Gmail.
4. Nyefee Content na Wondershare Mobiletrans kpam kpam hassle- free.
Nhọrọ otu: eji kọmputa ka ịnyefe ọdịnaya site na otu ngwaọrụ ọzọ
Mgbe ọ na-abịa na-ebufe kọntaktị, akwụkwọ, audio video faịlụ na ndị ọzọ data si Windows ekwentị gam akporo ngwaọrụ, ejikọta ma ngwaọrụ gị PC maka data ebufe bụ ihe kasị họọrọ nhọrọ.
All na ị chọrọ ime bụ jikọọ ma ngwaọrụ gị na kọmputa ma ọ bụ na laptọọpụ na enyemaka nke data cables. Mepee ọ bụla nchekwa otu otu, na nanị idetuo-mado ọdịnaya site na windows ekwentị nchekwa na android ngwaọrụ nchekwa.
Uru na ọghọm nke a ụzọ
Nke a bụ mfe usoro ka ịnyefe ọdịnaya site na otu ngwaọrụ nke ọzọ. Ọ dịghị mkpa na ihe njikọ Ịntanetị. Files na-agafere n'ime nanị sekọnd ole na ole.
The ọjọọ akụkụ bụ ma eleghị anya eziokwu na faịlụ na nchekwa na-agafere ha ẹdude usoro. Ya mere, ụfọdụ videos, ihe oyiyi, na faịlụ na ị na-emeghe na gị Windows ekwentị nwere ike ghara ịbụ dakọtara na Android na ngwaọrụ ma nwere ike ghara ọbụna oghe mgbe ebufe. Otu bụ nsogbu na-ebufe kọntaktị ekwentị, dị ka ọ bụla handset echekwa kọntaktsị na a dị iche iche usoro. Usoro a ike ga-eji nyefee ozi ederede site na otu ngwaọrụ ọzọ.
Nhọrọ abụọ: iji Microsoft OneDrive ngwa
Microsoft smart ekwentị sistemụ nwere ike ghara ịbụ ka ewu ewu dị ka Android ma ọ bụ iOS. Ma, ụfọdụ n'ime Microsoft ngwa ọdịnala ndị kemmasi n'ezie! Microsoft OneDrive ngwa bụ otu n'ime ndị ngwa na nwere ike na-egosi n'ezie na-enye aka n'ihi na-ebufe data site na otu ngwaọrụ nke ọzọ. The ngwa akwado Windows, iOS na Android ngwaọrụ.
Nzọụkwụ mbụ bụ ibudata OneDrive ngwa ma na ngwaọrụ. Mgbe nbudata, ngwa ga-akpali gị banye na iji akaụntụ Microsoft gị.
Ozugbo ị banye na-eji gị Outlook na aha njirimara na paswọọdụ, ngwa ga-emeghe ya n'ụlọ peeji na-egosipụta na gị ẹdude ọdịnaya na ị na echekwara na OneDrive.
Ugbu a, na-emeghe otu ngwa gị windows ekwentị na pịa bulite akara ngosi.
Pịa "Bulite faịlụ" nhọrọ ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị bulite akwụkwọ, ọdịyo faịlụ, na ndị ọzọ na-akwado formats. Ọ bụrụ na-ịchọrọ ị bulite videos na foto site na ngwaọrụ gị, dị nnọọ ịhọrọ raara onwe ya nye nhọrọ.
The ngwa ga-egosipụta niile nchekwa na sub-nchekwa gị Windows ekwentị. Mepee nchekwa otu otu na-ahọrọ ọdịnaya na ị chọrọ nyefee na ọhụrụ gị na ekwentị.
Ozugbo ị họrọ nchegbu faịlụ, dị nnọọ pịa "bulite". The ngwa ga-amalite na-ebugote niile họrọ ọdịnaya na OneDrive nkesa.
Mgbe na-ebugote niile dị mkpa ọdịnaya site Windows ekwentị na OneDrive, na-emeghe OneDrive ngwa na gị android ngwaọrụ.
Họrọ ọdịnaya na ị chọrọ ka mmekọrịta gị na Android ekwentị na nanị download otu ihe ahụ.
Nke a na nhọrọ adabara ndị njem na mba dị iche iche gburugburu ụwa na-agbanwe ha ekwentị ọtụtụ ugboro. Dị ka ndị niile dị mkpa ọdịnaya anọgide echekwara na OneDrive, ọrụ ike weghachite ya ọ bụla na-n'ebe ọ bụla. All na ha mkpa bụ ihe Android, Windows, ma ọ bụ iOS handset na-akwado OneDrive ngwa.
Dị ka e kwuru na mbụ, a nhọrọ bụ kasị mma kwesịrị ekwesị maka ndị na-achọ ka nyefee kọntaktị, akwụkwọ, na faịlụ enweghị na-eji PC. Ọtụtụ ndị na-eji usoro a nyefee ha ọdịnaya site na otu ekwentị ọzọ mgbe na laa. Images, akwụkwọ na videos nwere ike anya na enyemaka nke OneDrive ngwa, na nwere ike ibudata na dakọtara usoro.
Ugbu a drawback! Ị chọrọ onye na-arụsi ọrụ njikọ Ịntanetị gị Windows na gam akporo ngwaọrụ, ọtụtụ ọkacha mma, Wi-Fi. Nyefee data nwere ike iri oge, dị ka faịlụ na-akpa kpọfere OneDrive, na, na, si OneDrive gị Android ngwaọrụ.
N'ụzọ dị mwute, a na ngwa ike nyere aka na-ebufe kọntaktị ma ọ bụ ozi ederede site na otu ekwentị ọzọ.
Nhọrọ 3: Nyefee kọntaktị iji Outlook na OneDrive
Na-iji nyefee kọntaktị site na Windows ekwentị gam akporo ngwaọrụ, mmekọrịta gị na kọntaktị site na Windows ekwentị na Outlook. Mgbe ahụ, banye-na gị Outlook akaụntụ site na desktọọpụ PC ma ọ bụ mbadamba, na pịa "Ndị mmadụ" nhọrọ si dobe ala menu.
Na-esonụ na ihuenyo, pịa "Jikwaa" ma họrọ "Export maka Outlook na ndị ọzọ na ọrụ" site dobe ala menu.
Ozugbo ị pịa na nhọrọ, Outlook ga-akpaghị aka download kọntaktị na ngwaọrụ gị n'ụdị .CSV faịlụ.
Ugbu a, na-emeghe Gmail, na pịa Gmail si kọntaktị nhọrọ.
Na-esote na ihuenyo ga-egosi gị ọtụtụ nhọrọ, na mkpa ka ị họrọ "mbubata."
Ozugbo mmapụta windo na-egosi, pịa họrọ faịlụ nhọrọ, na họrọ Outlook kọntaktị CSV faịlụ na ị ibudatara Outlook. Mgbe ahụ, nanị pịa mbubata.
N'ime sekọnd ole na ole, Gmail ga mmekọrịta niile kọntaktị si Outlook faịlụ ma jikota ha na gị ẹdude kọntaktsị na Google. Malite gị gam akporo ngwaọrụ, na nanị mmekọrịta Google si kọntaktị na gị na ekwentị kọntaktị. Ọ bụ ya! Nke a bụ ma eleghị anya ụzọ kasị mma nyefee kọntaktị site na Windows ekwentị Android ngwaọrụ, na na kwa, free nke na-eri.
Nhọrọ 4: Nyefee Content na Wondershare Mobiletrans kpam kpam hassle- free
Wondershare Mobiletrans nwere ike nyefee gị photos, videos na music faịlụ ozugbo gị Winphone ka Android. Ọ nwekwara ike weghachite kọntaktị gị si OneDrive ndabere nke Winphone gị android ngwaọrụ. Ndị na-esonụ na-egosi otú nke a nwere ike na-enweta.
Nzọụkwụ 1: Mepee Wondershare Mobiletrans na pịa na "na ekwentị ekwentị transfer".
Nzọụkwụ 2: Jiri USB Gịnị jikọọ ma gị android na ngwaọrụ ma windows ngwaọrụ gị na kọmputa. On ejikọta ma ngwaọrụ, pịa "tụgharịa" bọtịnụ na omume iji ịgbanwee na na ebensinweta igwe.
Nzọụkwụ 3:: N'oge a, ị ga-họrọ chọrọ faịlụ nyefee site n'ịhụ n'igbe faịlụ ụdị na-enyocha. Ị nwekwara nhọrọ nke ekpocha data na ebe ekwentị ma ọ bụrụ na ha chọrọ. Nke a ga-hụ na niile data gị android ngwaọrụ na-ekpocha tupu amalite transfer ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ nhọrọ nke "Clear data tupu oyiri".
Cheta na: Nyefee kọntaktị site na windows ekwentị na android ngwaọrụ ga achọ ka ndabere kọntaktị gị OneDrive mbụ mgbe Mobiletrans-enyere gị aka weghachi ya na gị na android ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 4:: Pịa "Malite Nyefee" na-amalite na-ebufe. Gbaa mbọ hụ na ma igwe anọ n'ọnụ n'oge transfer usoro.
2 Ụzọ nyefee music si iPhone ka android
Nyefee Data si Samsung S4 ka Cheta 4 / Cheta 3 Mfe
Otú nyefee Photos site na kọmputa na-Nexus 7
Otú nyefee ekwentị kọntaktị n'etiti Android, iOS na Symbian
Nyefee na Ndi ana-akpo si Galaxy S2 ka S3 na 1 Pịa
Olee otú Enwe Video on PSP Ọbụna PSP 3000?
> Resource> Nyefee> ụzọ anọ nyefee data si Windows ekwentị Android ngwaọrụ maka free